UApple ufuna ukuhlawula amagcisa ngaphezulu | IPhone iindaba
Ngoku kubonakala ngathi intengiso ye-iPhone inyukile, nangona kungafuneki bayeke ukwenza izinto kwi-smartphone yabo, iApple ijolise kwinxalenye ebalulekileyo yezixhobo zayo kwiinkonzo zayo. Ivenkile yeApple okanye iApple Music zimbini kwezi nkonzo ezinceda abo baseCupertino ukuba bagcine izibonelelo zabo kwaye sesinye sezizathu zokuba babheje kakhulu kwiApple Music. Intshukumo yokugqibela ibiyi Isindululo sokuba amagcisa abize ngaphezulu ukuveliswa kwakhona komxholo wayo.
Isiphakamiso, sihanjiswe kwiBhodi yeRoyalty yase-US, njenge funda KwiBillboard, ifuna indlela elula yokuhlawula ababhali beengoma kunye nabapapashi bomculo abanomxholo osasazwayo. Ngaphandle kwamathandabuzo, utshintsho luya kunceda amagcisa, abapapashi kunye neenkampani ezirekhodayo, kodwa akucaci ukuba oku kuya kuba kuhle Spotify, inkonzo enabasebenzisi abaninzi abangayihlawuliyo kwaye ixhomekeke kwinxalenye yentengiso ebavayo aba basebenzisi.
Amagcisa aya kuba ngabona baxhamli baphambili kwisindululo sika-Apple
Kwinkqubo yangoku, iinkampani ezibonelela ngenkonzo yomculo yokuhambisa hlawula abaqambi kunye nabapapashi phakathi kwe-10,5% kunye ne-12% yomvuzo wakho kwinto uBillboard ayibiza ngokuba "sisixhobo esintsonkothileyo." Imali yahlulwe yenziwa kwakhona kunye neeroyalties zoomatshini emva koko zahlawulwa kubapapashi kunye "nemibutho eqokelelweyo." Isindululo sika-Apple kukuba amagcisa, iinkampani ezirekhodayo kunye nabapapashi bomculo zibize iisenti eziyi-9.1 ngeembono nganye eziyi-100, enokufana ngokufana nokuthenga ingoma. Ingxaki kukuba ezinye iinkonzo ezinje ngeSpotify esele ikhankanyiwe okanye iYouTube kuya kufuneka ihlawule loo mali, eya kubanyanzela ukuba batshintshe imodeli yeshishini labo ukuze babhatale amagcisa.
I-Apple kunye nabanye ababoneleli bemixholo yokusasaza akufuneki bahlawule abapapashi umrhumo osemthethweni obekwe yiBhodi yeRoyalty kuba banokuthethathethana ngezivumelwano zabo, kodwa uthethathethwano phakathi kwabapapashi kunye neenkonzo zokusasaza ziya kuqala kwindawo eyahlukileyo ukuba isindululo seapile iba yinto eqhelekileyo.
Ngaba oku kulungile kubasebenzisi? Ngokuqinisekileyo akunjalo. Okanye hayi ekuqaleni. Ukuba kukho into thintela ukhuphiswano, abasebenzisi bashiywe ngaphandle kokukhetha kwaye akukho nkonzo okanye amaxabiso aya kuphucula. Into ecacileyo yeyokuba ukuba isindululo siyenzeka, abona bantu bachaphazelekayo ngabasebenzisi abangahlawuli nayiphi na inkonzo yomculo esasazayo. Ngaba ungomnye wabo?
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » UApple ufuna ukuhlawula amagcisa ngakumbi, anokulimaza uSpotify
Umhlathi wokugqibela yeyona nto ndiyithandayo ndakhe ndazifunda kule bhlog. Ukuqinisekisa ngaphandle kokuphazamiseka ukuba kubi kubasebenzisi ukuba iApple ifuna ukunika imali ngakumbi amagcisa yinto engakholelekiyo.
Molo Pobretolo. Andiqondi ukuba uqonde nto. Kubi kuba oko kuya kwenzakalisa iinkonzo ezibonelela ngemodeli yasimahla. Ngaba bekungayi kuba kubi kubasebenzisi ukuba umculo wasimahla ovela kwiSpotify okanye kwiYouTube unyamalale? Kwelinye icala, ayinakuba yeyokuzingca xa ndiHlawula umculo wam osasazayo. Ndithetha ngabasebenzisi ngokubanzi, oko kukuthi, ukucinga ngabanye akuyona inkcazo efanelekileyo yokuzingca. Ndiyacinga. Ngaphezu koko, ndihambise WONKE umculo wam kwidrive yangaphandle ukuze ngalo lonke ixesha ndidlala ingoma evela kwinkonzo yomculo eshukumayo, amagcisa ahlawulelwa okanye ongezelwe. Kweso siqendu ndiyathetha nangokupheliswa kokhuphiswano, kodwa ndicinga ukuba ufunde "u" hayi "(olandelwa ngu" okanye hayi ekuqaleni ").
Iingozi ezinomdla kunye nePokémon Go ziyathintelwa kwiiveki ezintathu kamva